Simila - ukuxilongwa lalivamile kwezokwelapha. Kungaba elasungulwa ezikhiqiza amaqanda, e-sinuses maxillary ebuchosheni, futhi noma isiphi isitho somzimba. Isiguli, wezwa ngakho lukadokotela, basambatheka: "simila? Kuyini isifo limelela? Futhi, okubaluleke kakhulu, kangakanani-ke kuyingozi? "Cishe nje ngesikhathi esisodwa, sikhuluma namuhla, ukuzama ukuqeda ukwesaba futhi abayiqondayo le nkinga.
Simila: yini uhlobo lesi sifo kweqiniso nokwamanga
Kwezokwelapha ngokuthi sokugembula simila ingaphakathi kokuba udonga futhi ugcwale into liquid noma-semi ketshezi. Lolu hlobo capsule ukuthi zingase zimiswe kwezitho zomzimba noma izicubu ahlukahlukene. Ubukhulu bayo kanye nesakhiwo izindonga sixhomeke kakhulu kanjani futhi nini lokhu zokugula uvele impela lapho okwaqala ngayo, njll
Kukhona izinhlumba yeqiniso neyamanga. Lesi sakamuva akudingeki EPITHELIAL ulwelwesi akhethekile akhiwa, isibonelo, isibanda noma izicubu elikhanyayo of kabi noma isiphi isitho.
Simila: lokho ramolitsionny noma uhlobo yisinanakazana kwalesi sifo?
Kuye kwenzeke kanjani kukhona yinhlama emzimbeni womuntu, ihlukaniswe yaba izinhlobo.
Ngakho, ramolitsionnye izinhlumba kungenzeka uma izicubu necrosis, okuyinto akhiwa ingxenye necrotic ehlukanisiwe igobolondo enempilo. Ngaphakathi kuwo aqoqana ngokuhamba kwesikhathi ku-semi ketshezi izidakamizwa osale wokugoqa kwezicubu efile. Lolu hlobo pathologies libhekene ikakhulukazi ubuchopho (ngokuvamile emva unhlangothi) noma ithambo (isibonelo, ilunga amadolo kwakhiwa simila).
Ngo izinhlumba yisinanakazana has a indlela ehlukile nesenzakalo. Lokhu zokugula buyisigaba elalikudle lapho liseyisibungu yentuthuko tapeworm ukuthi kwangena emzimbeni womuntu (ngokuvamile kwesibindi, amaphaphu noma ubende) kwakheka ezungeze capsule. On nesimo esifanayo, isiguli ngokuvamile ifunda kuphela emva ukuhlolwa okungahleliwe, kusukela isikhathi eside, le simila akusho ukuzibonakalisa.
Uma avele yimuphi izimila sitho, kwakhiwa emhlabeni umgodi, into enjalo ubizwa ngokuthi nginesimila lwesimila. Ngokuvamile zenzeka kwezitho yezindlala. Bona zibalwa njengoba adenoma fibrosis we nezindlala salivary, lymphangitis fibrosis ameloblasts fibrosis.
kuphakama Ukugcinwa uhlobo zokugula echazwe kusukela uketshezi ukungakwazi outflow kusuka, isibonelo, wendlala noma salivary. Zastaivayas ukugeleza ukuvaleka ngenxa amatshe amancane noma isivalo elula zanqwabelana yensimbi liquid umgodi therein - simila.
Kuyini nginesimila we luteum Corpus , futhi polycystic syndrome esibelethweni?
Eceleni cabanga Corpus luteum simila follicle wesibeletho lapho ngobugebengu ngesikhathi nge-ovulation, esikhundleni egcwele Corpus luteum amaseli bese udonga uxhuma uyavuma uketshezi esobala ukwakha umgodi.
Lokhu zokugula sitholakale ngokuvamile kuyabethusa abesifazane abakhulelwe. Siqala ngephutha, njengoba Yiqiniso yokukhulelwa akuwona umthwalo.
Okubizwa ngokuthi "simila ophuzi" simo singenzeka kunoma yimuphi owesifazane. Isizathu sokuba ngokuvamile lokhu kuba yisithiyo-hormone okuthiwa i-ukungalingani. It ugobhozela yokukhulelwa, ikakhulukazi nge unezimpawu ezikahle (webele isisa ukuhlukumeza lomjikelezo) futhi ngokuvamile ziyanyamalala bebodwa.
Kodwa izinhlumba wesibeletho amaningi (polycystic) kukhona ifomu ikakhulukazi azalwa naso zokugula futhi ezidinga ukuthi kungenelelwe kuhlinzwa, kuze kususwe yonke isitho.
Smegma abafana - inkinga evamile
Besisu useshonile yomthambo i-aorta: izimpawu, uphethwe, ukuphathwa
Ngifundise ngesifo sikashukela. Ukwelashwa nezeluleko jikelele
Ukuhlala Igumbi of 18 amamitha: wezangaphakathi. Imibono kanye Izithombe
"Umninindlu Wild": umkhiqizo izingcaphuno ukuhlela Mikhail Saltykov-Shchedrin
Izizathu ukuthi lixhawulana.
Umhlangano Umzali ebangeni lesi-4. Loluhlelo lomhlangano umzali
Isobho sezinkukhu njengesiqalo sezifundo zokuqala